Umzukulu kaMandela uthi ngeke esayivotela i-ANC | News24
Umzukulu kaMandela uthi ngeke esayivotela i-ANC
Cape Town - Umzukulu kalowo owayengumengameli wakuleli ongasekho emhlabeni, uNelson Mandela, uNdileka, uthi ngeke esayivotela i-African National Congress (ANC), usho kanje ebuka udaba lokushona kweziguli eLife Esidimeni kanjalo nolwakwa-Sassa.
UNdileka Mandela ukhulume ngoLwesihlanu wathi lezi zinkinga ezimbili yizo ezimlahlekisele ngethemba ngeqembu.
OLUNYE UDABA: Umzukulu kaMandela uthi ngeke aqophisane noMalema
"Ngizizwa kanje, ngithukuthele futhi lesi akusiso isinqumo engisithathe ngenxa yentukuthelo. Kudala ngicabanga ngaso kanti manje sekufike ekugcineni," usho kanje tshela iNews24.
"Izinkinga ezinkulu eziholele kulesi sinqumo udaba lwase-Life Esidimeni nolwakwa-South African Social Security Agency (SASSA)."
Lo mzukulu kaMandela uthe lezi zinkinga zombili yizo ezimsizile ngokushiya kuKhongolose lungakafiki ukhetho lwango-2019.
UNdileka Mandela oneminyaka engu-52 ubudala, ongunesi, uyisizukulwana sesithathu sakwaMandela.
Uthe ngokwakhe iziguli eziphazamisekile emqondweni zaseLife Esidimeni kwakungamele zishone ngoba zazingekho buthaka emzimbeni.
Uthe udaba lwakwaSassa yilo anqume ngalo ukuthi sekwenele.
"Uma ufuna uxhaso lwemali lokwenza izinto ezizosiza abantu ezindaweni esizemaphandleni utshelwa ukuthi imali ayikho, kepha bheka nje izigidigidi zamarandi eziya kwiCash Paymaster Services zingakanani," esho.